Pakistana: Ezaka fanampiana – Tatitra avy any an-toerana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Aogositra 2010 22:52 GMT
Hatramin'ny niharatsian'ny tondra-drano any Pakistana, nieritreritra ny hanao hetsika fanavotana sasany ahazoam-bokatra aho, ary hatramin'izao ny asako dia voafetra amin'ny fanampiana ireo tra-boin'ny tondra-drano, napetraka ao amina sekoly tsy lavitra an'i Multan. Nanana vola nangoniko avy amin'ireo namana sy fianakaviana koa aho handehanako any amin'ireo faritra voakasiky ny tondra-drano.
Fanamboarana làlan-tongotra hampitohizina. Sarim-panajàna avy amin'i Dr. Awab Alvi avy ao amin'ny Twitpic
Izaho, niaraka tamina mpianatra sasany avy ao amin'ireo Anjerimanontolo Pakistaney dia nanangana Azm-e-Nau – Avelao izahay hanarina an'i Pakistana, mba handraisan'ireo tanora amin'ireo hetsika sosialy. Io izany no fotoana fanararaotana be ho anay ka ho an'ireo dia fanavotana dia niara-niasa tamin'ireo mpikambana ao amin'ny Sehatra fiadian-kevitr'ireo Ankizy sy Tanora Pakistaney (PCYF), fikambanana tsy miankina any Multan.
Tamin'ny 15 Aogositra 2010 no nanombohanay ny dianay teny an-toerana voalohany ka naka kamiao kely feno sakafo sy fitaovana fanavotana izahay ho any Muzaffargarh sy Mehmood Kot, izay faritra roa tratra aoriana indrindra any Punjab. Zavatra ilaina amin'ny fanavotana mitentina 50000 roupies (585$) ihany no afaka novidianay, kely ihany fa kendry voalohany sarobidy.
Tao amin'ny blaogiko aho dia nizara ny nampitsiry ny hevitra fitsidihan-tany tao amiko:
Androany, raha nahazo simaiso avy amin'ny namana iray aho nanasa ahy handeha any Muzaffargarh hizara zavatra ilaina amin'ny fanavotana, avy hatrany aho dia namaly hoe eny (ny antony goavana nahatonga izany fahavononana izany dia ireo fitantaràna mahavariana avy amin'ny olona). Tamin'ny 11 ora aho tonga dia nankany Ghanta Ghar avy hatrany, nahitako mpikambana maro ao amin'ny PCYF (Sehatra fiadian-kevitr'ireo Ankizy sy Tanora Pakistaney (PCYF), fikambanana tsy miankina any an-toerana) niandry fiaingàna. Taorian'ireo fifankafantarana fohy, niainga ho an'ny dia izahay.
Zotra Fanavotana ireo tràtran'ny tondra-drano, fizarana 1: nampiakarin'i LetusrebuildPaksitan
Ny tena nahatohina ahy indrindra dia ny tsy fisian'ny manam-pahefanam-panjakàna mihitsy, asa fanavotana na karazana fanampiana hafa mety ho avy amin'ireo faritra milamina kokoa any amin'ity faritany ity. Na ny anjara fanavotan'ny tafika tany amin'ilay faritra aza dia toby kiritika teo akaikin'ny tobin-kerinaratra any Muzaffargarh izay ahitàna ampahany zara raha misy amin'izy rehetra. Noho izaho efa namaky betsaka momba ireo toby fanavotana sy ireo hetsika, somary tohina ihany aho nahita fa toa atao tsinontsinona mihitsy ity faritany ity.
Zotra Fanavotana ireo tràtran'ny tondra-drano, fizarana 2: nampiakarin'i LetusrebuildPaksitan
Milamina sady mora kokoa ny manampy ireo tra-boina afindra mankany amin'ireo toby fialofana an-drenivohitra. Nefa ireo izay mbola any amin'ireo faritra ravan'ny tondra-drano na ny manodidina no tena mila mafy ireo fanampiana. Maro amin'izy ireo no mitondra biby fiompy miaraka amin'izy ireo, dia milasy kely toa izay mifindra any amin'ny toerana mandrimandry kokoa. Ireo nifidy ny hiala kosa voatery mivarotra ireo bibiny latsaky ny vidiny tany am-boalohany.
Vakio ato ny ambiny.
Nilaza tantara mampihorohoro tamiko ireo tra-boina, izay voalaza amin'ny antsipiriany ao amin'ny lahatsoratra iray hafa ao amin'ny blaogiko:
“Zara raha nitsoaka niaraka tamin'ny ainay izahay. Onja mahatratra 3,5 metatra eo ho eo ny haavony no nandrakotra ny tanàna iray manontolo rehefa nitobaka ny Fantson'ny Muzaffargarh ” hoy ny fitantaràn'i Muhammad Hanif avy ao Basti Kandi Wala, tanàna an-kilometatra vitsy miala an'i Mehmood Kot. Eo am-pitsanganana eo akaikin'ny olona nafindra monina maro, mietny Hanif fa afaka mieritreritra fiainana milamina mihitsy, na hoe mandritra ny fotoana lava, “Raha tsy midina tanteraka ny haavon'ny rano, tsy misy fiverenana amin'ny mahazatra. Ary na misy aza izany, izahay tsy maintsy hanamboatra trano, tany lobolobo ary indrindra indrindra, ny hofany izay tsy maintsy aloa amin'ireo tompontany.”
Efa ho herinandro izao no tapaka ny làlana mivoaka sy miditra, difotry ny rano ny làlana. Ary ankilany, Mehmood Kot ary etsy andaniny i Kot Addu tsy azo ivezivezena. [..] “Nizaka tena izahay nandritra ny herinandro, tsy nisy sakafo na fanampiana avy amin'ireo manam-pahefàna na iza na iza.” hoy Ghulam Asghar, 35 taona, mitantara.
Rehefa tafaverina avy any Muzaffargarh sy Mehmood Kot aho dia afaka nanao fifanarahana ho ana toby fitsaboana tamin'ny alalan'ireo fifandraisako ao amin'ny Tobim-pitsaboana Nishtar izay anisan'ireo hopitaly lehibe indrindra aty Pakistan, ary nahazo mpitsabo avy tao.
Nanoratra antsipirany momba ny Tobim-panampiana ara-pahasalamàna Medical karakarain'ny Azm-e-Nau aho ato:
Taorian'ny asa mafy nandritra ny herinandro, afaka namatsy fanafody ampy ny Azm-e-Nau, mpitsabo efatra avy any Nishtar ary mpamatsy iray. Tamin'ny voalohany ny tanjona dia ny hanangana trano lay any amin'ny toerana mety ho amin'izany ary hijanona ao mandra-pahatapitry ny andro. Nefa noho ny habetsahan'ireo vondrona tranolay sy olona miparitaka, nanapa-kevitra ny hihetsika izahay. Fiatoana in-telo tany amina toerana samihafa no natao, anisan'izany Qureshi wala, ary marary manodidina ny 350 hatramin'ny 400 no nozahàna sy notsaboina tamin'ireo fanafody tsotsotra. [..] Nandritra ny fizahana rehetra dia, notànana an-tsoratra tsy tapaka ny rakitry ny fizahàna. Izany no natao dia ny mba hahafantarana ireo aretina tena mamely ka ahafahanay maka fepetra mifandraika amin'izany ho an'ireo zotra manaraka.
Indraindray, mila traikefa betsaka vao afaka mahatsapa ny tena mampalahelo amin'izao zava-mitranga izao. Mety hampalahelo ihany ny fijerena ny fitarainan'ireo tra-boina amin'ny fahitalavitra, nefa rehefa mahita azy tava aho, nahita ny hanoanana mibaribary eny amin'ny tavan'izy ireo maina ary nahita maso ireo ady hanina sy rano, hitako ny hangezàn'ny olana sy ny filàn'ireto olona ireto fanampiana mafy dia mafy. Naharesy lahatra ahy ny hanomana zotra fanampiana ara-pahasalamàna iray hafa mankany amin'ny faritra izany, amin'ity indray mitoraka ity dia any amin'ireo faritra lavitra any Rajanpur sy Jampur. Haharitra telo andro ny dia, hanomboka ny 27 Aogositra ka hatramin'ny 29 Aogositra.
Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny Tatitra Manokan'ny Global Voices momba ny Tondra-drano tany Pakistana 2010.